Adore Cricket Ian Bell
Izithuba ezifakiwe: Ian Bell
0 Cook ubonisa ukholo yakhe yokusebenza Ballanced
ipapashwe 27th EyeKhala 2014 ngokuthi Mateyu Woodward & efayilini phantsi eNgilani, Indiya , Test Cricket. uvuselelwe 3 EyeDwarha, 2016 .
Wenze kakuhle Alistair Cook. Kulungile, ke waphulukana nokwenza ikhulu leminyaka, nje, kodwa ukuba amanqaku 95 xa iichips zisezantsi ngokwenene zathatha isimilo esingakholeleki. Inye kuphela indlela awayezothula ngayo abagxeki yayikukubaleka okuthile kwaye ngethemba amanqaku namhlanje abuyiselwe ngokupheleleyo kwifom. Ukusabela kwesi sihlwele xa wayenika inkulungwane yakhe kunye nokunyuka xa wayephuma ebaleni xa wayethetha ivolumu ngenkxaso yakhe phakathi kweqela lekhilikithi elibukele esidlangalaleni. Yena umntu olungileyo kwaye engafanele ezinye diatribe ngamalahle indlela yakhe.
UGeoffrey Boycott uxele kwangaphambili umzobo-kwaye iRose Bowl pitch ijongeka ngathi iza kuvelisa omnye umdlalo ongacacanga apho ibheji ilawula ngaphezulu. Uhlekisa kanjani. Sifuna iibitch ezinento ezinokuthengiswa zombini amalulwane kunye nee Bow Bowers, lowo uvuza abagqatswa abaphezulu kuzo zoqeqesho zombini. Ngoko ke yintoni ukuba umdlalo ngeentsuku ezine endaweni emihlanu? Ixesha elifutshane lokucinga ngokusemngciphekweni wokujongela phantsi ilaphu lomdlalo-kwaye ke izakuvela phi le mali?... Funda Inqaku Pheleleyo
0 India uthabathe inyathelo kwi uvavanyo lwesithathu
ipapashwe 21st EyeKhala 2014 ngokuthi Mateyu Woodward & efayilini phantsi eNgilani, Indiya , Test Cricket. uvuselelwe 3 EyeDwarha, 2016 .
Iimvavanyo ezimbini, 1-0 ukuya eIndiya. Ihlobo laseNgilani elihlwempuzekileyo liqhubekile ngokugcwala namhlanje ngokothusayo (uxolo, ehlazisayo) Ukuwa emva kwesidlo sasemini namhlanje ukunika iindwendwe inyathelo lokuya phambili kolu chungechunge. Kubungqina obukhoyo ngoku kuya kuba nzima ukubona eyadlulayo iIndiya iphumelela uthotho.
tags: Alastair Cook, Gary Ballance, Graeme Swann, Ian Bell, Jimmy Anderson, Joe Root, kevin Pietersen, Mat Phambi, Moeen Ali, Monty Panesar, Stuart Broad
0Kothuthu luthuthu, ENgilani eluthulini
ipapashwe 5th EyoMqungu 2014 ngokuthi Mateyu Woodward & efayilini phantsi Test Cricket, uthuthu. uvuselelwe 6 EyoMqungu, 2014 .
Kuba nto ndiza kuyithetha ndiya abinzwe phantsi phezulu ... kodwa mna ndiyavuya ukuba olu ngcelele Uthuthu ugqibele. Ilungile iOstreliya ukuba badlale ngcono kakhulu kunokuba bekugqitywa ngamalungu abo nase-England, kuba inxalenye enkulu, abso­lutely diabolical.
Ngokuqinisekileyo njengobusuku obulandelayo ngemini iiAussies ziqweqwedise umdlalo ophumeleleyo wama-5 ukuya kuma-5, Ukwaqubuda eNgilani ngenxa yenani elipheleleyo elibuhlungu alifanelanga kumgca wamanye amazwe. Iindwendwe ngoku kufuneka zibuyele umva, phinda wenze iqela kwaye uthathe iziqwenga kolu khuphiswano olunokuba yingozi ukuya ezantsi. ... Funda Inqaku Pheleleyo
tags: Alastair Cook, Ostreliya, Ben Stokes, Boyd Rankin, Brad Haddin, Chris Rogers, Chris Tremlett, david Warner, eNgilani, Gary Ballance, George Bailey, Graeme Swann, Ian Bell, Jimmy Anderson, Joe Root, Jonathan Trott, Jonny Bairstow, kevin Pieterson, Mat Phambi, Michael Clarke, Mitchell Johnson, Monty Panesar, nathan Lyon, peter Siddle, Ryan Harris, Shane Watson, Steve Smith, Stuart Broad, uthuthu, tim Bresnan
ithunyelwe 9th EtiMnga 2013 ngokuthi Mateyu Woodward & efayilini phantsi Uncategorised.
Kwenzeke ntoni eNgilane? Kwiimvavanyo ezimbini zokugqibela baye ehlazisayo. Andicingi ngayo nayiphi na into oyithandayo ukuba ungayikhupha kuwo nawuphi na umdlalo.
Umgca wokubetha ube kufutshane nokubaleka kangangexesha elithile ngoku. Izaphetha zaphumelela uthuthu lweNgilani okokugqibela, ngaphandle kweenzame ezilungileyo kakhulu zokubetha umgca ophuma ngaphambili ukuya kohlwaywa emihlathini yoloyiso (I-Bell emnandi eceleni) kwaye ngoku, kwiimeko zase-Australia, INgilani ngokwenene iphikisana nayo. Amalulwane ayaqhubeka nokuzabalaza kodwa eyona nto ibaxhalabisayo yindlela aphuma ngayo - isithuba sokungakhathali kunye nesidubedube kunye nokungabikho kwesicelo. Ulindele ii-fireworks ezivela kuKevin Pieterson kwangoko kwi-innings kodwa hayi ezinye ... Funda Inqaku Pheleleyo
2 BROADside eNgilani malunga abadlali uphumle
ithunyelwe 29th EyeThupha 2013 ngokuthi Mateyu Woodward & efayilini phantsi uthuthu.
Njengoko uhlalele ukuba siphulaphule T20 freak-show (ngayo ingaphantsi beats nantoni isepha esekelwe inkunkuma umfazi ujongile) Ndiye ecingisisa le mpikiswano nto sele yabavuselelayo emva eNgilani waphumla abadlali abaphambili ezintlanu oluthi ODI.
uCaptain Cook, intsimbi, Graeme Swann, Jimmy Anderson and T20 nomphathi Stuart Olubanzi bonke ngokubeka iinyawo zabo kwaye sivumele entsha-look ngokuthabatha eNgilani kwi Aussies ngenxa komdlalo ezintlanu series.
Owayesakuba Captain Michael Vaughan iye uluvo lwakhe kunye Stuart ngokubanzi iye adubula. Amajelo osasazo athe kratya kwiimpikiswano ezisempilweni kwaye azixhokonxa emgceni. Funda Inqaku Pheleleyo
1 I-Australia ibambe isandla esiphezulu - kumdlalo werabha ofileyo
ipapashwe 22makabuyele EyeThupha 2013 ngokuthi Mateyu Woodward & efayilini phantsi uthuthu. uvuselelwe 7 EyoMsintsi, 2013 .
Iintsuku ezimbini e-Australia ngokuqinisekileyo zinesandla esiphezulu. Kodwa ke into. Uthuthu olo luphumelele kwaye luphumelele kakuhle oko. Lo ngumdlalo werabha ofileyo kwaye ukhumbuza kakhulu u-Ashes uthotho lwakudala xa iNgilani yayikhupha ngesiquphe ukusebenza okuhle kwisigqoko xa urn yayiphethe iiAussies.. Abadlali abathi ixesha nexesha baphinde bayekele iqela phantsi baya kuthi ngequbuliso babambe isihlanu okanye okanye bafake inkulungwane kwaye umndilili wabo ophonononge imbali uya kujongeka nje enesidima. Funda Inqaku Pheleleyo
tags: Alastair Cook, Ostreliya, Chris Woakes, eNgilani, Uvavanyo lokuqala, Graeme Swann, Graham Magic, Ian Bell, Jimmy Anderson, Joe Root, Jonathan Trott, Mat Phambi, Shane Watson, Simon Kerrigan, Stuart Broad, uthuthu
1 Aussies Tonked - Ke kaloku, Phambili
ipapashwe 19th EyeThupha 2013 ngokuthi Mateyu Woodward & efayilini phantsi uthuthu, Uncategorised. uvuselelwe 21 EyeThupha, 2013 .
Kuqala, uxolo ngokungahlaziyisi isiza kudala-kunye nomnye umbhali wale ndawo bendiqala ukugqitha kwiYurophu.
Thina umva ngoku nangona, ngoko ke ndingamoyiki.
Ngoko ke, I-England yambatha u-Ashes ngentshukumo yokusebenza ebonakalayo ngomhla wokugqibela kwaye yabathumela ngokwenene bepakisha. Kuninzi okubhaliweyo malunga nokusebenza kwe-England kunye, ngokukodwa, Ukusebenza kukaStuart Broad. Yayintle kakhulu, ekupheleni.
Ke ndiza kugxila kwinto eyahlukileyo kancinci, kancinane off-iziko ukuba uza.
Xa iOstreliya yayikukuphakama kwabo iminyaka embalwa emva (kubonakala elide kangaka edluleyo ngoku!) eyona mpazamo bayenzileyo yayingekuko ukuphalaza abantwana abasakhulayo kwaye baye bafumana nethuba lokufumana ukuphakama komdlalo weqakamba womdlalo wovavanyo .. Funda Inqaku Pheleleyo
tags: Alastair Cook, alex Lees, Gary Ballance, Graeme Swann, Ian Bell, Mat Phambi, Yorkshire
0 3-0 siye eNgilani ... sifunde ntoni?
ipapashwe 14th EyeThupha 2013 ngokuthi Jon Scaife & efayilini phantsi uthuthu. uvuselelwe 30 EyeThupha, 2013 .
Bendikhe ndaya kwiholide kwiiveki ezimbini ezidlulileyo kwaye andinathuba lokubhala malunga nekhilikithi. Ngeli xesha sele kukho 2 ngaphezulu Uthuthu lomdlalo wokulinganisa kunye neNgilani bandise ukukhokelela kwabo ukuya kwi-3 ukuya kweli-3. Ukude kude nazo zonke iintloko zokuthetha andivanga ukuba mabathini, kangaka apha ezinye iingcamango zam, unin­flu­enced by the pundits.
tags: Alastair Cook, alex Lees, Ostreliya, Brad Haddin, Chris Rogers, Chris Tremlett, david Warner, eNgilani, Fawad Ahmed, kuphuma Uvavanyo, Graeme Swann, Ian Bell, Jimmy Anderson, Joe Root, Johnny Bairstow, Jonathan Trott, kevin Pieterson, Mat Phambi, Michael Clarke, Moisés Henriques, nathan Lyon, peter Siddle, Ryan Harris, Shane Watson, Simon Katich, Steve Smith, Steven Finn, Stuart Broad, uthuthu, Uvavanyo wesithathu, Usman Khawaja
Trent Bridge - A guide emhlabeni Test (292 izimvo)Xa lelokuqala kuthotho "bakhenkethi kwizizathu" thina ihlanganisa Trent Bridge kunye iinkcukacha ubeko emhlabeni kunye neendawo okusemandleni ukuba ahlale Ukuze uqale nge, apha umfanekiso ...
Ngaba abantu umbala-iimfama bomvu-luhlaza ukudlala iqakamba? (72 izimvo)Ngelixa bayakrokra ngokwam ngayo ekupheleni komdlalo (ngenxa ekukhanyeni) izolo ebusuku, Kwathi qatha kum - ngebhola ebomvu kunye ibala eliluhlaza, Abantu umbala-iimfama bomvu-luhlaza ukudlala iqakamba ...
The Bowler ngayo Ukubamba ... ngezikweko sa qhubeka (58 izimvo)Phantse wonke fan leqakamba uya ndikuvile ikhowuti odumileyo, yenziwa Brian Johnston, "Bebambe Bowler ngayo, le Batsman ngayo Willey". Nokuba kukanjani eli ngokwenene kwathiwa ngqo emoyeni kuphinda nemiba enkulu ...
Siyavuyisana Bangladesh njengoko eNgilani Spin ukuba Yoyisa (52 izimvo)Hee Bangladesh ngomhla uvavanyo win kuqala iNgilane. Usindiso basifanele kakuhle kwaye uthotho zazinokuziphelisa lula Wawugqiba 2-0 ukuya iinginginya kunokuba 1-1 zoba. Both matches were excellent ...
Trent Bridge - A guide emhlabeni Test (38.4k izimvo)Xa lelokuqala kuthotho "bakhenkethi kwizizathu" thina ihlanganisa Trent Bridge kunye iinkcukacha ubeko emhlabeni kunye neendawo okusemandleni ukuba ahlale Ukuze uqale nge, apha umfanekiso ...
The Bowler ngayo Ukubamba ... ngezikweko sa qhubeka (18.2k izimvo)Phantse wonke fan leqakamba uya ndikuvile ikhowuti odumileyo, yenziwa Brian Johnston, "Bebambe Bowler ngayo, le Batsman ngayo Willey". Nokuba kukanjani eli ngokwenene kwathiwa ngqo emoyeni kuphinda nemiba enkulu ...
Ngaba abantu umbala-iimfama bomvu-luhlaza ukudlala iqakamba? (7.7k izimvo)Ngelixa bayakrokra ngokwam ngayo ekupheleni komdlalo (ngenxa ekukhanyeni) izolo ebusuku, Kwathi qatha kum - ngebhola ebomvu kunye ibala eliluhlaza, Abantu umbala-iimfama bomvu-luhlaza ukudlala iqakamba ...
Zonke eNgilani entsha, ngaphandle P. (5.4k izimvo)Kwi weqakamba iindaba inkulu emini England ubhengeze kuphinda Kevin Pieterson uya kuba kwizicwangciso zazo, ngempumelelo nokuphangwa batsman babo phambili. Oku ekugqibeleni izakufunyanwa ukuba ubhale inqaku yam yokuqala ...
David Cook phezu Ngaba abantu umbala-iimfama bomvu-luhlaza ukudlala iqakamba?: “The pink ball appears grey/blue in red/green deficient vision, depending on its severity. I did a simulation with colour blindness…”